Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 58aad | Jowhar Somali News Leader
Home LOVE STORY Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 58aad
Samiira is diyaarintii cashada caawa ayay ku jirtay iyada oo maalintaa oo dhan ku mashquulsaney is marinta wax kasta oo ay aamisnayed in caawa ay quruxdeeda billi karto wallow saaxiibka ay ku kalsoon tahay ee caawa cashada u kaxeynayo uu dhankiisa kaga mashquulsanaa inuu habeen xun ku qoro nolosha Samiira.
Daqiiqado ayaa ka harsanaa cashadii mudo la madlayey Qadar waxa uu ku sugnaa baabuurkiisa isaga oo doonayey inuu u dhaqaaqo xaga xaafada Samiira oo balanta aheyd inuu soo kaxeeyo habeenkaas ay soo wada casheeyaan Qadar isaga oo ku sii socda wadada ayaa waxaa u soo dhacay Fariin dhanka telefoonka ah nasiib darase hees ugu shidneyd baaburkkiisa ayaa uu la maqli wayey.
Samiira oo habeenkaas farxada xad dhaaf ah laga dareemayo waxaana ka muuqato kalsooni dheeri oo ay nafteeda ku qabto Qadar oo dhanka kale iyada doonayo inuu xumaan la doono waxaase ayaandaro aheyd inuusan Qadar arkin fariintaas dareenka jaceylka ka muuqatay.
Xilligii la filaayey ayaa uu Qadar tagay xaafada Samiira sidii ayay isku soo raaceen iyada oo Hooyo Farxiya la sii dardaarantay laguna dareensiiyey in ay gabadheeda amaano u tahay Caawa Qadar nin hadalkaa u fadhiyo ma uusan aheyn waxaana meel u yaalay qorshihiisa caawa oo uu si fiican kaga soo shaqeeyey.
Waxaana la soo abaaray maqaayadii cashada uu hore ugu diyaariyey markii maqaayada illinkeeda la soo gaaray ayaa Qadar telefoon u soo dhacay in cabaar ah ayaa uu lugta hakiyey Samiira oo fursad u siineyso in uu telefoonka ku hadlo ayaa dhowr talaabo ka soo dhaqaaqday Qadar markii uu u yimid ayaa uu ku yiri.
Wax yar ii dulqaado
Wax daran miyaa jira
Maya lacag aan sugaayey ayaa akoonka lagu soo shubay wax yar waan hubinayaa in ay so dhacday
Haddii ay intaa tahay ka waran haddii aan miiskeena tagno oo aan halkaas ku dhameysato badalkii aan albaabka taagnaa laheyn.
Maasha allah waa talo fiican aan hore u socono waliba miiska ugu fiican Ayaan noo soo diyaariyey aan hore u galno.
Markiiba miiskooda ayaa la geeyey waxaana dul yimid geegeeyihii maqaayada waxayna Samiira u sheegtay inuu cabitaan u keeno cashada ay in cabaar ah sugayaan si ay u sheekeystaan Qadarna waa uu ku raacay ileyn laf ahaantiisa akoonka ayuu doonayey inuu ka hubiyo in ay ku soo dhacday lacag uu suuqa ka sugaayey kaa oo ah badeeco la gaday waxaase Qadar telefoonkiisa saarnaa dhowr fariimood oo ay ugu horeysay fariintii Samiira oo uusan hore u arkin inta uu furay in ayaa uu aqriyey waxayna fariinta u qorneyd sidaan.
Macaane waxaad ii aheyd bidhaan meel fog iga muuqda balse manta waad iga dhow dahay intaas waxaa ii tahay rajadii nolosheyda furihii mustaqbalkayga macaane waan isku kaa haleeyaa bal ereyada ila aqriso waa dareenka dhabta ah ee aan kuu qaaday.
HORTAA MA AQOON JACEYLKA
HORTAA MAAN ARAG DHIBTIISA
HORTAA INDHAHEYGA OOYEY
ILMADA LAMA QUBIN XUBIGA
HORTAA EREYADA KALGACAL
KUMA ORAN QOF AADMIYA
HORTAA UURKANI KU TABAY
CID KALE UMA SOO ARAMIN
HORTA XIISAHANA KUMA LI’I
QALBIGA ULUSHADA MA BADIN
ANIGA ADIGAAN IFAKABA
RAJO KAA SUGAA EEEEE
JACEYLKA ASTAAN U NOQO
Qadar erayada dareenka xoogan habaarsanaa ee ay Samiira u soo qortay mar qura ayay dareenkiis badishay waxa uu jirkiisa noqday mid sidii barafkii oo kale u qaboobay waxa uuna la yaabay sida ay kalsoonid leh ee ay gabadha ugu kalsoon tahay iyo sida uu isaga u fikaareyey Qadar ereyada wax badan qalbigiisa dareen ku abuureen hadalna waa u ka soo bixi waayey Samiira oo dareentay in wax ay qaladan yihiin ayaa Qadar ku tiri.
Qadar aboowe wax dhib ah miyaa jira mar kaliya ayaad isbadashay Maxaa ku helay wax daran miyaa laguu soo sheegay.
Maya dhibma jiro
Samiira oo aan weli u arkin inuu caadi yahay ayaa koob biya ah u soo dhiibtay Qadar markii uu damcay inuu biyaha qabsado ayay gacantiisa awoodi waayey inuu xijiyo Samiira ayaa aragtay in gacantiisa aysan degeneyn oo ay jareyneyso ayaa tiri.
Qadar caafimaadkaaga ma fiicna maxaa laguu soo sheegay.
Qadar oo weli wax qarinayo ayaa yiri
Maya waxba ma jiraan ee cashada noo dalab
Qadar macaane wax ayaad iga qarineysaa laakiin waxaan dareemayaa in caafimaadkaaga uusan wanaagsaneyn.
Waan fiican nahay waxba ma jiro.
Dhib waa uu jiraa laakiin ma dooneysid in aad ii sheegto si kasta waan baxeynaa
Maya maya waan casheyneynaa
Dhib malaha cashada waan qaadaneynaa hana igu diidan caafimaadkaaga ma fiicna
Maya Samiira waan fiican nahay dhib waa uu jiraa balse ma weyna
Samiira markiiba waxa ay u yeeratay shaqaalihi maqaayada waxa ay u sheegtay in cashada ay qaadanayaan isla markaana uu u soo diyaariyo in cabaar ah kadib Ayaa cashadii ay dalbatay oo loo baceeyey ayaa loo keenay markii banaanka loo soo baxay ayay Samiira xaalka uu ku jira ka yaabtay Qadar inta ay qoortiisa gacanta ku taabatay ayay ogaaday in isaga oo dhan uu baraf noqday ayaa ku tiri.
Qadarow ma garan waxa laguu sheegay balse waxaad halis ugu jirtaa wareega dhiigaada inuu hoos u dhaco taasi waxa ay muujineysaa in xaalad Qatar ah ay ku jirto noloshaada ee ii dhiib furaha baabuurka xaaladaan baabuur kuma kaxeyn kartidee.
Baabuur wadid ma taqaan
Waliba ruqsad Ayaan u heystaa
Samiira markiiba baabuurka ayay furtay oo cashadii ku tuurtay una soo laabatay ay Qadar alaabka u furtay oo ay baabuur ku ogaaday cabitaan cashada raacnaa ayay u furtay oo ay u dhiibtaysidii ku soo kaxeysay waxayna in cabaar ah markii ay soo socdeen ku tiri.
Qadar inuu wareega dhiigaada uu sameynayo uu hooseeyo ayaa dhici karta ee biyahaas cab waa in aan isbitaal ku geysaa.
Looma baahna waan fiican nahay abaayo
Haddii ay sidaa tahay xaafadeena Ayaan tageynaa halkaas Ayaan dhiiga kaaga cabirayaa haddii uu hooseeyaa daawo guriga waa laga helayaa.
Previous articleCiidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada oo ka baxay deegaanka Fiidow oo dhowaan ay la wareegeen
Next articlePuntland oo soo bandhigtay xisaabcelinta lacagihii ay ka heshay Dowlada Federalka